Ny fanohanana Premium miavaka mba hitadiavana orinasa mahomby
Matetika loatra isika no maheno tantaran'ireo mpampiantrano - na mpitantana fanofana fialan-tsasatra lehibe na mpandraharaha amin'ny trano maro anaovana serivisy manerana ny aparhotels maromaro izy ireo - pms or Channel Manager mamela zavatra be faniriana. Amin'ny tranga maro, mety tsy ny tsy fisian'ny endri-javatra akory izay mahasosotra azy ireo, fa ny haavon'ny fanohanana azony.
Miaraka amin'ireo mpamatsy rindrambaiko mamindra ny fanatitr'izy ireo mankany amin'ny rahona, na dia ny fampiofanana fototra aza dia efa nivoaka avy teo am-baravarankely tamin'ny tranga maro. Na dia antsoina aza hoe SaaS (lozisialy ho serivisy) ny tolotra dia toa tsy hita amin'ny tranga maro ilay singa fanompoana. Ny fanohanana mitohy dia mety ho tena malemy na tsy misy, ary ny fifandraisana amin'ny mpamatsy rindrambaiko iray dia mety hahatonga anao hanana tsiro ratsy. Izany indrindra no zava-misy rehefa iharan'ny fanamavoana, fireharehana ary fieboeboana ny fanehoan-kevitra momba ireo fiasa efa misy na fangatahana fanatsarana ny rafitra.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou Premium Support manampy?
Ao amin'ny Zeevou dia fantatray tanteraka fa na dia mamirapiratra aza ny vokatra mety ho novolavolainay, dia tsy misy dikany ho an'ny mpampiantrano mandray vahiny izany raha tsy hoe miaraka ampiarahana amin'ny Premium Support. Izany no antony nanokan-tena ho amin'ny fiantohana fa mila ny zavatra ilainay rehetra mpitsidika no nihaona. Vokatr'izany, ny fanarahana ny fisoratana anarana isaky ny Patron dia tendren'ny Mpanaraka fahombiazana ho mpiara-miasa, izay mpitantana kaonty ary eo am-pelatanana hatrany izy hanolotra fanampiana sy torolàlana momba ny fomba ahazoana tombony betsaka an'i Zeevou, na dia ny fanarahana ny sambo voalohany sy ny trainig aza fe-potoana.
Ny antso an-tsambo nataon'i Zeevou dia natao tamin'ny antso an-tsary maro, mandra-pahatsapanao fa nahalala ny rafitra ianao ary faly manohy mampiasa azy irery. Na dia mihoatra an'izany aza dia tsy sarotra ny manatona antsika. Azonao atao ny mifandray amin'ny Mpandrindra fahombiazan'ny mpiara-miasa aminao amin'ny WhatsApp raha te hanontany, ary afaka mitatitra bibikely na mandefa fangatahana fiasa vaovao mivantana avy ao Zeevou avy amin'ny Raising a Hand.
Ny Forums Hosters Partner Host isam-bolana dia fotoana mety tsara ho anao koa hanomezana ny hevitrao momba ireo fiasa vao navoaka farany. Ankoatr'izay, azonao atao ny manome ny hevitrao momba ireo fiasa tianao ho voasa amin'ny ho avy. Raisinay an-tsaina izany tamberina izany mba hanatsarana hatrany ny vokatra sy ny fanolorana ary ny laharam-pahamehana ho an'ny anay tondrozotra raha jerena.
Fantatry ny ekipanay fa ny fahombiazantsika dia noho ny fahombiazan'ny Mpialokalatray, ary dia manolo-tena izahay rehetra hiezaka ny hanome ny filanareo araka izay tratranay. Raha afaka manampy anao hahomby izahay dia hahita fahombiazana ihany koa ary miaraka afaka mamorona Ny revolisiona famandrihana mivantana!